रणवीरले किन गरे भन्सालीको फिल्म रिजेक्ट
सोमवार, फाल्गुन १२, २०७६ ०२:१५:१४ युनिकोड पुरानो वेबसाइट
बिहिवार, आश्विन ३०, २०७६ एजेन्सी
मुम्बई । बलिउडका चर्चित निर्देशक लीला भन्सालीसँग काम गर्न बलिउडका थुप्रै कलाकार लालाहित हुन्छन् । उनले बनाएका चलचित्र एकपछि अर्को सुपरहिट छन् । त्यसैले पनि उनीसँग काम गर्ने नयाँ कलाकार सुपरहिट हुन्छन् भने पुराना कलाकार पनि काम गर्न उत्तिकै नजिक हुन चाहन्छन् । तर बलिउड अभिनेता रणवीर सिंहले भन्सालीको नयाँ फिल्म ‘गंगुबाई’मा अभिनय गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
निर्देशक भन्सालीले रणवीरलाई फिल्ममा ‘क्यामियो रोल’ (अतिथि भूमिका)को अफर गर्दा उनले फिल्म खेल्न अस्वीकार गरेको लाइभ हिन्दूस्तानले उल्लेख गरेको छ । यसअघि भन्सालीले सलमान खान र आलिया भट्टलाई लिएर फिल्म ‘इन्शाअल्लाह’को सुटिङ सुरु गरेका थिए तर सलमानले फिल्म छोड्दा ‘इन्शाअल्लाह’को सुटिङ बीचमै रोकियो । ‘इन्शाअल्लाह’को सुटिङ रोकिँदा भन्सालीले नयाँ फिल्म ’गंगूबाई’को घोषणा गरेका थिए । रणवीरले ‘गंगूबाई’मा अभिनय गर्न अस्वीकार गरेपछि फिल्ममा कार्तिक आर्यन अनुबन्धित भएका छन् । फिल्ममा आर्यनसँगै अभिनेत्री आलिया भट्टको पनि अभिनय रहनेछ ।
आलिया यतिबेला आफ्नै होम प्रोडक्सनमा निर्माण भएको फिल्म ‘सडक २’को सुटिङमा व्यस्त छिन् भने कार्तिक फिल्म ‘पति पत्नी और वो’ को सुटिङमा व्यस्त छन् । जसमा कार्तिकसँगै अनन्या पाण्डे र भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिकामा छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहिवार, आश्विन ३०, २०७६, ०७:३३:००
दोस्रो नेपालगन्ज महोत्सवमा भिटेनसहितका चर्चित कलाकार आउने
'मलंग'ले पहिलो साता कति कमायो ?
नरैनापुरको मियाँपुर्वामा कवाली सुन्न दशौ हजारको भीड
पिरती नाप्ने के ले हो?भन्दै आइपुगे गितकार रविन स्वप्निल....
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कालो झण्डा देखाउन खोज्ने विद्यार्थीहरु पक्राउ सोमवार, फाल्गुन १२, २०७६
अवैध लागुऔषधसहित एक जना युवती पक्राउ
नेपालगन्जका जनप्रतिनिधिसंग बिप्लब समुहले माग्यो चन्दा,चन्दा बारे अनुसन्धान गर्ने:एसपी ओली
सुरु भयो राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको छैठौं सभा
दङ्गिशरणमा सोमबार देखि राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड
रेडियो सद्भावमा १० दिने उद्घोषण तथा पत्रकारिता तालिम शुरु
प्रधानमन्त्रीसहित ४ जना विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दर्ता
ललिता निवास जग्गा प्रकरणका ३५ जनालाई अदालतमा हाजिर हुन आदेश जारी
पराजितहरुबाट भरिँदैछ राष्ट्रियसभा !
बागेश्वरीपोष्ट डटकम नेपालमा विशेष गरी प्रदेश नं. ५, कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अग्रणी स्थानमा रहेको हरेक कोणलाई विश्लेषन गर्ने डिजिटल पत्रिका हो । यसले मुख्य, राजनीति, समाज, स्थानिय तथा प्रादेशिक, आर्थिक, खेलकुद तथा मनोरञ्जनका समाचारमा विशेष महत्व दिएको छ । यसको स्थापना शुक्रवार, साउन २९, २०७२ (१४ अगस्त, २०१५) भएको हो ।